Buy Pain Remove Machine (အညောင်းအညာ ပျောက် ကိရိယာ) (20,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Pain Remove Machine (အညောင်းအညာ ပျောက် ကိရိယာ)
Pain Remove Machine
အညောင်းအညာ ပျောက် ကိရိယာ
ခါး၊ တင်၊ ဇက်ကြောတို.ရဲ. နာကျင်မှု မှန်သမျှ ပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့်
အညောင်းအညာ ပျောက် ကိရိယာလေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
ကွန်ပျူတာ အထိုင်များသူတွေ၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ၊ ပုံမှန် လေ့ကျင်ခန်း လုပ်သူတွေအတွက်
အဆင့်သုံးဆင့်အထိ ကွေးလို. ရပြီး ဘုသီး ၆လုံး ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မလို ညောင်းလာတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ကားပေါ်မှာ အိပ်ယာပေါ်မှာ၊ ဆိုဖာ ပေါ်မှာ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ
30000 (Best Quality)
များများဝယ်ရင် ပို.ခ လျော့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆီချေ စက် ကျားမ မရွှေးသုံလိုရတယ...
အမည်: Pain Remove Machine (အညောင်းအညာ ပျောက် ကိရိယာ)